भोलिको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल जेठ ०६ गते बिहीबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे २० तारिख….. – SUDUR MEDIA
भोलिको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल जेठ ०६ गते बिहीबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे २० तारिख…..
May 19, 2021 AdminLeaveaComment on भोलिको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल जेठ ०६ गते बिहीबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे २० तारिख…..
भोलि मिति २०७८ साल जेठ ०६ गते बिहीबार । ईश्वी सन् २०२१ मे २० तारिख । नेपाल संवत् ११४१ । राक्षस संवत्सर । उत्तरायण । ग्रीष्म ऋतु । श्रीशाके १९४२ । बैसाख शुक्लपक्ष । तिथि–अष्टमी,०७ बजेर १४ मिनेट उप्रान्त नवमी । नक्षत्र– मघा,११ बजेर २९ मिनेट उप्रान्त पूर्वफाल्गुनी । योग– व्याघात,१९ बजेर ३५ मिनेट उप्रान्त हर्षण । करण– बव, ०७ बजेर १४ मिनेट उप्रान्त बालव,१८ बजेर ४४ मिनेट उप्रान्त कौलव । आनन्दादिमा–मुसल योग । चन्द्रराशि–सिंह । काठमाडौंमा सूर्योदय बिहान ०५ बजेर १४ मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ४८ मिनेट । दिनमान ३३ घडी ५३ पला । सीताजयन्ती । अष्टमीव्रत । श्रीपशुपतेर्दमनार्पण । गोरखकाली पूजा । सीताजयन्ती ।
मेष(चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) भौतिक तथा मानव निर्मित स्रोत साधनको परिचालन गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । सन्तान तथा छोराछोरिको प्रगतिमा मन रमाउँनेछ भने वंश बृद्धिको योग रहेकोछ । बौद्धिक ब्याक्तित्वहरु सामु तपाईले प्रस्तुत गर्नुभएको खरो प्रश्तुतिले सबैको मन जित्नेछ । दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाईनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ ।
बृष(ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) समाजसेवामा जनताको आलोचना सहितको समर्थन प्राप्त हुनेछ । छाति सम्बन्धि समयस्या पिरोल्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको आलोचना सहितको समर्थन प्राप्त हुनेछ । प्रेममा अबिश्वास हुन सक्छ ध्यान दिनुहोला । साझपख पढाई लेखाईमा समय तथा ध्यान दिन सके सफलता हात लाग्नेछ । कृषि तथा सहकारि व्यावसायलाई भने समय सापेक्ष आधुनिकिकरण गरि मनग्गे लाभे लिन सकिनेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) आफन्त,छिमेकी तथा दाजुभाई सँग साना तथा घरायसि कुरामा राज बाजिनेछ । न्यालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईको पक्षमा आउँनेछ छैनन भने विवादमा सामेल नहुनु होला । माया प्रेममा अबिश्वास बढ्नेछ भने जीवन साथि सँग घरायसि कुरामा मनमुटाब सिर्जना हुने सम्छ ध्यान दिनुहोला । खेलकुद क्षेत्रमा सहभागि हुनेहरुका लागि समय मध्ययम रहेकोछ ।
कर्कट(ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) बिशिष्ट व्याक्तिहरु सँग भेटघाट हुने अवसर जुर्नेछ भने मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । टाडाबाट खुसिको समाचार सुन्न पाईनेछ । नोकरिमा बढुवा, प्रशंसा तथा पुरस्कार पाईने योग रहेकोछ । औषधीजन्य तथा खाद्यान्नसँग सम्बन्धीत सामानको उत्पादन तथा व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीमा मन्दि आउनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) राम्रा पहिरनले अरुको मन आफुतिर लोभ्याउन सकिनेछ । नया प्रबिधिको प्रयोग मार्फत आफुलाई अब्बल साबित गर्न सकिनेछ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाई वा लेखहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ । परिवारका साथ मिष्टान्न भोजनका साथ समय व्यातित गर्न सकिनेछ । धर्म तथा यस्तै कार्यक्रममा सहभागि हुने अवसर जुर्नेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) स्वास्थ्यमा सुधार भएर जाने तथा पुरानो रोगहरु केहि भए अलि बिसेक हुनेछ । आफन्त तथा अग्रजहरुको सुझाब तथा सल्लाहलाई अध्ययन गरि अगाडि बढ्दा राम्रो रहेको छ । घर परिवार तथा आफन्तबाट बाट छुट्टिएर लामो दुरिको यात्रा गर्नु पर्दा नरामाईलो लाग्नेछ । व्यापार व्यावसायमा नाफा कमाउँन निकै समय खर्चनु पर्नेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) दैनिक उपभोग्य बस्तु ,औषधी तथा अनलाईनबाट सप्लाई हुने सामानको व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको प्रयोगबाट भनेजस्तो आम्दानि गर्न सकिनेछ । कृषि,पशुपालन,तरल पदार्थ तथा खनिज पदार्थजन्य उद्योगमा लगानि गर्दा भनेजस्तो नाँफा कमाउँन सकिनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा अरुलाई उछिनेर अगाडि बढ्ने समय रहेको छ ।
बृश्चिक(तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको साथ सहयोग नपाईने हुँनाले आफ्ना योजनाहरु थातिनै रहनेछन् । राज्यको बिभिन्न पदमा बस्नेहरुले समयमा काम नगर्दिनाले कामहरु थाति रहनेछन् । गोप्य सुचनाहरु बहिरिने हुँदा ईज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्न सक्छ ध्यान दिनुहोला । मनोबल कमजोर हुँने हुँनाले बिद्या तथा प्र्रतिश्पर्धामा अरु भन्दा पछि परिनेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) भाग्य तथा समयले साथ दिने हुदा सानो प्रयत्नले उपलब्धिमुलक कामहरु गर्न सकिनेछ । बुवा वा बुवा सरहका मानिसबाट तपाईले शुरु गरेको कामलाई सहयोग हुँनेछ भने पैत्रिक धन सम्पतिको प्रयोग मार्फत मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । पुराना साथिभाई सँग भेटघाट गरि रमाईलो ठाउँमा स्वादिष्ट परिकारका साथ रम्न सकिनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) आर्थिक अभावले कामहरु समयमा सम्पादन नहुँदा मानशिक तनाब बढ्नेछ । व्यापार व्यावसायमा नाँफा कमाउन निकैनै समय दिनु पर्नेछ । पढाई लेखाईमा मन नजाने हुँनाले अरुभन्दा पछि परिनेछ । स्वास्थमा समस्या आई उपचार खर्च बढेर जानेछ । बैक तथा बित्तिय क्षेत्रमा गरिएको लगानि भने सन्तोषजनक नै रहनेछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले धार्मिक यात्रा हुनेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) माया प्रेम तथा पति पत्निबिचको सम्बन्धमा बिश्वासको बाताबरण मजभुत भएर जानेछ । पारिवारिक माहोलमा दिन बित्ने तथा मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । बिपरित लिङग प्रतिको आकर्षण बढेर जाने तथा भौतिक सम्पति प्राप्तिको योग रहेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा प्रविधिको प्रयोग मार्फत आफ्ना भनाई वा लेखहरु जनमानसमा लैजान सकिनेछ ।
मीन(दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची) गोप्य कुराहरु बाहिर आउन सक्छन् ध्यान दिएर काम गर्नुहोला । ऋण,रोग तथा संकटको सामना गर्नुपर्नेछ भने तपाईको काममा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु सिर्जना हुनेछन् । धन सम्पति तथा अचल सम्पति हराउन तथा लुटिन सक्छ सजक रहनुहोला । नयाँ काम शुरु गर्नु भन्दा गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ । बाहिरी वातावरण तथा मौसमको ख्याल गर्नुहोला स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ ।
साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस : जेठ २ गते आईतबारदेखी जेठ ८ गते शनिबार सम्मको
मेष (चू ,चे, चो, ला, लि, लू, ले, लो,अ) आफन्त तथा साथिभाईको सहयोग पाईने हुनाले काम गर्न उत्साह जाग्नेछ । पढाई लेखाईमा सफलता प्राप्त हुनेछ भने खोज तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गर्न सकिनेछ । बिभिन्न उपाहार तथा भौतिक साधन प्राप्तिको योग रहेको छ । सत्रुलाई परास्त गर्दै न्यायिक निर्णयहरु आफ्नो पक्षमा पार्न सकिनेछ । प्रेम प्रसङगमा रमाउँन चाहने जोडिहरुले यो साता आफ्नो मायालुको माया भरपुर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एकल तथा साझेदारि ब्याबसायमा लगानि बढाएर प्रसस्त नाफा कमाउँन सकिनेछ । लामो तथा रमाईलो ब्याबसायिक यात्राको तय हुनेछ भने शुभ तथा मांगलिक कार्यमा सहभागि भई साथिभाई तथा आफन्तका साथ रमाईलो गर्दै स्वादिष्ट भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ, वा, वी, वू, वे, वा) समाज तथा साथिभाईको काममा अल्झनु पर्दा आफ्नो काम धाति रहनेछ । घर जग्गा तथा सवारि साधनको खरिद बिक्रि गरि कहिमात्रामा लाभ लिन सकिनेछ । पढाई लेखाईको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न निकैनै संघर्ष गर्नुपर्नेछ भने अरुले नै क्षमता प्रदशन गरेर पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र जित्न सक्नेछन् । माया प्रेममा अबिश्वास पैदा हुने तथा घर परिवारमा अग्रजहरु सँग मनमुुटाब बढ्नेछ । स्वास्थ्यमा छाति तथा पेट सम्बन्धि समस्या बढ्न सक्ने हुनालेखानपान तथा बाहिरि बाताबरणको ख्याल गर्नुहोला । साताको अन्तिम दिनहरु शुक्रबार तथा शनिबार समय तथा परिस्थितिमा सुधार आई बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराउदै आफ्नो पक्षमा नतिजा निकाल्न सकिने छ भने न्यालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा फैसला हुनेछन् ।
मिथुन (का, की, कू ,घ, ङ, छ ,के,को,हा) ब्यापार ब्यबसायमा सोचेजस्तो आम्दानि नहुने तथा रोकिएर बसेका कामहरु यो हप्तानि थाति नै रहनेछन् । दाजुभाई,छिमेकि तथा आफन्तहरुबाट सहयोग तथा सकारात्मक सल्लाहको अपेक्षा गरेपनि तपाईलाई बेवास्त गर्नेछन् । सवारि साधन तथा घर जग्गाको कारोबारमा हात नहाल्नुहोला घाटा लाग्ने योग रहेको छ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा बढिनै संघर्ष गर्दा मात्र सफलता प्राप्त हुनेछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याले सताउँने योग रहेको छ ख्याल गर्नुहोला । माया प्रेममा यो साता एक अर्कालाई शंकाको दृष्टिले हेर्दा अबिश्वास पैदा हुनेछ । खर्च बढ्ने तथा कामहरु समयमा सम्पन्न नहुने हुनालेकाम गर्ने जोस जागरमा केहि कमि आउँनेछ ।
कर्कट (ही, हू ,हे, हो, डा, डी, डु, डे, डो) पुराना कामहरु फत्तेहुने तथा नया काममा अवसर आउनेछ । बोलिकै भरमा धेरै कामहरु सम्पादन गर्न सकिनेछ । आफन्त तथा छिमेकिबाट उपयुक्त समयमा अर्थपुर्ण सहयोग पाईने हुदा अगि बढ्न सहज हुनेछ । न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा फैसला हुनेछन् । छोटो तथा रमाईलो यात्राको तय हुने हुनालेमन प्रशन्न रहनेछ । प्रेम तथा मित्रतामा बिश्वासको बाताबरण मजभुत भएर जानेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई हराउदै नतिजा आफ्नै पोल्टोमा पार्न सकिनेछ । साताको अन्तिम शुक्रबार र शनिबार ब्याबसायमा नाफा कमाउँन अलि बढि संघर्ष गर्नुपर्नेछ भने कृषि तथा पशुपालन ब्याबसायलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरि प्रशस्त आम्दानि गर्न सकिनेछ । घर परिवार तथा आमाबाट अलग्गिएर टाडाको यात्रा गर्दा मन दुख्नेछ ।
सिहं (मा, मी, मू , मे, मो, टा, टी, टू ,टे) सिंह रासि हुनेहरुको लागि यो साता उत्तम रहेकको छ । नयाँ नयाँ बस्तुहरुको प्रयोग मार्फत अरको मन आफुतिर आकर्शित गर्न सकिनेछ । समाजसेवा तथा राजनितिमा जनताको गतिलो समर्थन प्राप्त हुनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा यो साता तपाईकै बर्चस्व कायम रहने तथा नतिजा तपाईकै पोल्टोमा पर्नेछ । बोलिको प्रभाव बढ्ने तथा निर्णय क्षमताको बिकाश हुने हुदा तपाईबाट राम्रा राम्रा कामहरुको अपेक्षा गर्न सकिनेछ । छिमेकि,दाजुभाई तथा आफन्तबाट ब्यापार ब्याबसायमा आर्थिक सहयोग गर्ने हुनालेप्रशस्त नाफा कमाउँन सकिनेछ । न्यायलयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु यो साता तपाईकै पक्षमा फैसला हुनेछन् । प्रेम प्रशङगमा रमाई रमाई साता ब्यातित गर्न सकिनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पु,ष,ण,ठ,पे,पा) साताको शुरुमा लामो दुरिको बिदेश यात्राको तय हुनेछ भने बिदेशमा बसेर श्रम गर्नेहरुले प्रशस्त रुपैया पैसा कमाउँन सक्नेछन् । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउन सक्ने हुनालेखानपान तथा बाहिरि बाताबरणको ख्याल गर्नुहोला । मंगलबार तथा बुधबार परिस्थितिमा केहि मात्रामा सुधार आई अलि बढि समय लगानि गर्दा कामहरु बन्ने तथा आर्थिक ब्याबस्थापन गर्न सहज भएको महशुष हुनेछ । घर परिवार तथा आफन्त सँग कुनै काम गर्दा वा कारोबार गर्दा सजक हुनुपर्नेछ । शुक्रबार तथा शनिबार परिस्थिति तपाईकै पक्षमा आई पुराना थाति रहेर बसेका मुद्दाहरु हल भएर जानेछन् । कुटुम्बसँगको सँगको सुमधुर सम्बन्धले आर्थिक योजानाहरु बनाएर लागु गरि रुपैया पैसा कमाउँन सकिनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा मन जाने हुनालेपढाई लेखाईमा सुधार गर्न सकिनेछ ।
तुला ( रा, री रु, रे, रो, ता, ती, तू ,त) साताको शुरुमा पैतृक धन तथा सरकारि धन सम्पति प्राप्तिको योग रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा खनिज पदार्थको ब्यापार ब्याबसायबाट भनेजस्तो आम्दानि गर्न सकिनेछ । भौतिक सम्पति तथा दाजुभाईले तपाईले ईच्छाएको सर सामान दिनेछन् । मंगलबार तथा बुधबार समय तपाईको पक्षमा नहुने हुनालेआफन्त तथा घर परिवारमा आफन्त सँग घरायसि कुरामा बिवाद बढ्ने तथा सैद्धान्तिक राय बाजिनेछ । लामो दुरिको यात्रा तय गर्न सकिनेछ । खानपानमा ध्यान नदिदा सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउनेछ भने शरिरमा कामगर्ने जागर हराएर जानेछ । बिहिबार दिउसोबाट समय उत्तम रहेकोले सिर्जनात्मक कामगरि प्रसस्त रुपैया पैसा कमाउँन सकिनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा समय लगानि गर्नेहरुले जनताको समर्थन पाउनेछन् भने ब्यापार ब्याबसाय फस्टाएर जानेछ ।
बृश्चिक (तो, ना, नी, नू ,ने, नो, या,यी, यू) सरकारि कामकाजमा झन्झटलो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछ भने कर्मचारिबाट तपाईको काम समयमा नगर्दिनाले मानशिक तनाब बढ्नेछ । बुवा तथा बुवासरहका मानिससँग मनमुटाब बढ्नेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरु हावि हुनेछन भने नतिजा अरुकै हातमा पर्नेछ । मंगलबार, बुधबार तथा बिहिबार दिउँसो सम्मको समय उत्तम रहेको छ । यो समयमा प्राकृतिक स्रोत साधन तथा पानि सँग सम्बन्धित ब्यापार ब्याबसाय फस्टाएर जानेछ । आफन्त तथा दाजुभाईबाट तपाईको कामका भनेजस्तो सहयोग तथा समर्थन प्राप्त हुनेछ । प्रेम प्रशङमा रमाउँने समय रहेको छ भने घरमा पति पत्निबिच बिश्वास बढेर जानेछ । नौलो प्रकृतिको काम गरि आयस्रोत बढाउँन सकिनेछ । बिहिबार दिउसोबाट बैदेशिक यात्राहुने योग रहेको छ । बिदेशमा उत्पादिन सामानको ब्यापार ब्याबसायबाट मनग्गे आम्दानि हुने तथा बिदेशि सस्थामा नियूक्ति प्राप्तिको योग रहेको छ ।
धनु (ये, यो, भा, भी, भू , ध, फा, ढा, भे) यो साता धनु राशि हुनेहरुको लागि समय उत्तम रहेको छ । धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । धर्म सस्कृति तथा रितिरिवाज जोगाउँन धार्मिक सस्था तथा अनुष्ठानतिरको यात्रा हुनेछ । समाजमा जनताको काम गरि सम्मानित जीवन जिउँन सकिनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा समय लगानि गर्नेहरुले जनताको गतिलो समर्थन पाउँने छन् । नयाँ काम पाउँने तथा नोकरिमा पदोन्नतिको योग रहेको छ । ब्यापार ब्याबसायमा लगानि बढाई प्रसस्त आम्दानि गर्ने समय रहेको छ । साताको अन्तमा प्राकृतिक स्रोत साधनको भरपुर प्रयोग गरि रुपैया पैसा जम्मा गर्न सकिनेछ । यो साता प्रेम गर्ने जोडिहरुका लागि एक अर्काबिच माया तथा भावना साटासाट गरि समय ब्यातित गर्न सक्नेछन् भने पति पत्निबिच मायाको डोरो कसिलो भएर जानेछ ।
मकर (भो, जा, जी, जू, जे, जो, ख, खी, खू,खे, खो, गा, गी) साताको शुरु अर्थात आईतबार तथा सोमबारको समय तपाईको पक्षमा हुने छैन । बिभिन्न किसिमका समस्याहरुको फेस गर्नु पर्ने तथा आर्थिक अभावले कामहरु समयमा सम्पन्न नहुने हुनाले दैनिक गुजार गर्न हम्मे हम्मे पर्नेछ । ऋण,रोग तथा सत्रुको सामना गर्नुपर्नेछ । घर परिवारका एक अर्काबिच बिचारको तालमेल नमिल्दा कामहरु लथालिङग हुनेछन् भने मंगलबारबाट परिस्थितिमा सुधार आई केहिमात्राका कामहरु बन्नेछन् । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा अलि बढि समय लगानि गर्दा अरुलाई छोडि अग्र पंतिमा आउँन सकिनेछ । शुक्रबार तथा शनिबार भने नयाँकाम पाउँने तथा गरिरहेको काममा बढुवा हुने योग रहेको छ । सांगितिक माहोलमा आफन्त सँग जमघट भई मिष्टान्न भोजनका साथ रम्न सकिनेछ । नयाँ नयाँ लगानिको बाताबरण बन्ने तथा बुवाबाट सहयोग तथा समर्थन पाईने योग रहेको छ ।
कुम्भ (गू , गे , गो, सा, सी, सू , से, सो, दा) लामो दुरिको ब्याबसायिक यात्राको क्रममा बिभिन्न ठाउँ तथा दृष्यहरुको अवलोकन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । एकल तथा साझेदारि ब्याबसायबाट भने जस्तो आम्दानि हुने हुनालेथप लगानि गर्ने बाताबरण बनेर जानेछ । अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा नयाँ अध्यायको शुरुवात हुनेछ । मंगलबार बुधबार र बिहिबार दिउसो सम्म गरेका कामहरु बिग्रने हुदा कुनै नया काम थालनि नगर्नुनै राम्रो रहेको छ । बिभिन्न किसिममा समस्याहरुको फेस गर्नुपर्दा मानशिक तनाब बढ्नेछ । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउने तथा काम गर्ने जागर हराएर जानेछ । अनाबस्यक मानिसहरुको भेटघाटले बिवाद निम्त्याउन सक्छ । बिहिबार दिउँसो परिस्थितिमा सुधार आई रोकिएका कामहरु बन्ने तथा आम्दानिमा सुधार भएर जानेछ । धार्मिक अनुष्ठान तथा मन्दिरको दर्शन गरि टिका तथा प्रसाद ग्रहण गर्न सकिनेछ । शुभ मांगलिक तथा बैबाहिक समारोहमा सहभागि भई बिभिन्न मिठा परिकारका साथ रमाईलो गर्दै दिन कटाउँन सकिनेछ ।
मीन (दी दू थ झ ञ दे दो चा ची) साताको शुरुमा ब्यापार ब्याबसाय खस्केर जानेछ भने आम्दानिका स्रोतहरु साघुरिनेछन् । मामा तथा मावलि पक्षबिच सामान्य भनाभन तथा बिवाद बढ्नेछ भने न्यायिक निर्णयहरु तपाईको पक्षमा नहुन सक्छन् । सत्रु तथा प्रतिश्पर्धिहरु हावि हुने हुनालेकाममा बाधा तथा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छन् । मंगलबार देखि समय फेरिने हुनालेपति पत्निका साथ लामो तथा रमाईलो यात्राको तय हुनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई पाखा लगाई नयाँ उचाई चुम्न सकिनेछ । साझेदारि ब्याबसायबाट भनेजस्तो आम्दानि गर्न सकिनेछ भने लगानि गर्ने बाताबरण बन्नेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढ्ने योग रहेको छ । बिहिबार दिउसोबाट समय परिवर्तन हुने भएकोले कामहरु बिग्रने तथा अरुको गलत फन्दामा फस्न सकिन्छ ध्यान दिनुहोला । भौतिक सम्पति हराउँने, ठगिने तथा चोरिने सम्भावना रहेकोछ ध्यान दिनुहोला । ऋण तथा रोगको सामना गर्नु पर्दा दैनिकि अलि गाह्रो हुनेछ । तपाईको दिन शुभ रहोस ।
यो हप्ताको राशिफल हेर्नुहोस : जेठ २ गते आईतबार देखि जेठ ८ गते शनिबार सम्मको…..
नेपाल टेलिकमले ल्यायो लकडाउन अफर ! मात्र ३९ रुपैयाँमा अनलिमिटेड डाटा…..
‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ को आजको ब्लाइन्ड अडिसनमा यी ट्याक्सी ड्राइभरले कोच प्रमोदको भन्दा राम्रो गाए, तर यस कारण घरि घरि स्टेज मै रो’ए ! हे’र्नुहोस (भिडियो सहित)
आजको राशिफल हेर्नुहोस्ः मिति २०७८ साल साउन २७ गते बुधबार तदनानुसार सन् २०२१ अगष्ट ११ तारिख
अन्माएर गाडीमा चढीसकेकी बेहुली अंकललाई अंगालो हालेर बेहुलाको घर नजाने भन्दै नछोडेपछी भिडियो भयो भाइरल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (1,812)